Dad aan dawayn jiray ayaa Coranvirous ka qaaday – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Dad aan dawayn jiray ayaa Coranvirous ka qaaday
Dhakhaatiir ka tirsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya aoo ku hawlanaa la tacaaliida xanuunka ayaa laga helay xanunka. Waxaa ka mid ah Dr Maxamed Cismaan Maxamed (Nasiim). Waxa uu ka mid yahay guddiga Soomaaliya u qaabilsan la tacaalidda xanuunka Covid-19.
Waxa uu sheegay iney haatan xaaladdiisu wanaagsantahay oo ay ka yaraadeen calaamadihii uu horay isugu arkay sida qufaca iyo neefatii ku dhageysay.
”Ma garanayo sida aan ku qaaday xanuunkan iyo qofka aan ka qaaday balse waxaan u maleynayaa iney yihiin dadkii uu haleeyay fayraska ee aan la tacaaleynay”, ayuu yiri Dr Maxamed.
Dhakhtarka oo ka warramayay khibraddiisa intii uu haleelay xanuunka ayaa sheegay iney aad u adag tahay in qofka uu ku nagaado guriga.
”Way adagtahay fadhiga guriga sababtoo ah qof u bartay inuu subixii kaco oo u shaqa tago lama qabsan karo nolasha guru joogga ah”,
Sidoo kale Dr Maxamed Cismaan ayaa Bulshada Soomaalida u jeediyay talooyin muhiim ah oo la xiriira coronavirus.
Lahaanshaha sawirkaDR MAXAMED CISMAAN
”Talada ugu horreysa ee aan bulshada siinaya ayaa ah, waa iney raacaan farrimaha iyo wacyigelinta kaga imanaeysa Wasaaraddda Caafimaadka, midda labaad waa iney nadaafadda ku dadaalaan oo markasta gacmaha iska dhaqaan ayna ku dadaalaan iney dadka kala fogaadaan”.
Talooyinka kale ee bulshada siinaya waxaa ka mid ah: Haddii aad isku aragto calaamada fayraska Corono , fadlan, fadlan gurigaaga joog kana fogow dadka kuugula nool guria, ka dibna la xiriir bahda caafimaadka adigoo si hufan u raacaya talooyinka ay ku siiyaan”. Ayuu yiri Dr Maxamed Cismaan.
Dhinaca kale Wasiirka Caafimaadka ee waddanka Soomaaliya, Dr Fawziya Abiikar Nuur, ayaa sheegtay in ay ka soo raynayso xaaladda caafimaad ee bukaannada uu cudurkan ku soo ritay gudaha waddanka Soomaaliya.
Dr Fawziya ayaa markale ku celisay in cudurkan uu weli ku faafayo bulshada dhexdeed, taasna ay walwal iyo walaac ku hayso.
Dr Maxamed Cismaan
Waa iney dadku nadaafadda ku dadaalaan oo markasta gacmaha iska dhaqaan ayna ku dadaalaan iney dadka kala fogaadaan”
Xanuunka coronavirus ayaa saameyn weyn ku yeeshay howlihii guud ee Soomaaliya, oo ay ku jiraan dhaqdhaqaaqyadii waxbarshada oo hakad gala
Previous Wasiiru dowlihii Cadaaladda Hirshabeelle Xildhibaan Khaliif Muumin ayaa goor dhow u geeriyooday cudurka Coronavirus oo maalmihii la soo dhaafay u xanuunsanayay
Next Gurigaygaan Isku Karantiimeeyay Wasiir Faratoon